Xarumo warbaahineed oo hor leh oo maanta ku soo biiray ururka SIMHA (Daawo Sawirada) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
12th January 2014 MAREEG Af Soomaali 0
Kadib munaasabad ka dhacday hotelka MAKA AL-MUKRAMA aya waxaa ururka Somali independent Media Houses association (SIMHA ) soo bandhigay xarumo warbaahineed oo ku soo biiray iyo qorshaha dhaw ee uu uruka higsanayo.
Mas’uuliyiin isugu jiray wasiiro , xildhibaano , la taliyayaal sar sare , agaasimayayaal idaacadeed iyo xubno ka socday ururarada bulshada rayidka ayaa ka qeybgalay munaabadan ay SIMHA ku soo bandhigeysay qorshayaasheeda hawleed ee ay wajahi doonto sanadka cusub ee 2014.
Ismaacil Sheikh Khaliif agaasimaha idaacada STAR FM ahna gudoomiye ku xigeenka hay’ada SIMHA ayaa furitaanka munaasada ku soo dhaweyey xubnaha cusub ee ku soo biiray iyo mas’uuliyiinta madashada fadhudayba , waxuuna ku nuuxnuxsaday in SIMHA ay u furantahay cid walba gacma furana lagu soo dhaweyn doonom .
Wasiir ku xigeena warfaafinta C/shakuur Mire ayaa oo ka mid ahaa mas’uuliyinti madasha ka hadashay ayaa u mahad celiyey xubnaha SIMHA , waxuuna ku booriyey iney u dhabar adeegaan hawlaha horyaala .
Xabiibo Jimcaale “Biibto” oo ah saxafiyad rug cadaa ahna tifaftiraha wargeysyka maalinla ah ee Mogadishu Times ayaa sheegtay in dhinaceeda ay soo dhaweyneyso SIMHA ayna qeyb ka tahay , waxana ay ay ku baaqday in la muujiyo kalsooni si loo gaaro ahdaagta saxda ah ee SIMHA.
Abwaan Cismaan C/laahi Gure agaasimaha idaacada Kulmiye oo isna madasha ka hadlay ayaa sheegay in midnimada warbaahinta ay muhiim u tahay dhamaan warbaahinta madax banana ,waxuuna aad ugu dheeraaday muhimada midnimada .
Abwaanka ayaa gabayo guubaabo ah ka tiriyey madasha taasoo dhiiragalin weyn u aheyd xubnaha SIMHA .
Justin Merrozi iyo Eng Yarisow oo labaduba ah la taliyayaal sar sare oo madaxtooyada Somalia ka tirsan ayaa si isku mid ah u sheegay in midawga xarumaha warbaahinta dalka uu horseedi karo in horumar deg deg ah warbaahinta Soomaalida ku talaabsadaan.
Gabagabdi madasha ayaa waxa munaasabada hadal ka jeediyey gudoomiyaha KMG ee SIMHA Xasan Cali Geesey oo sheegay in SIMHA ay xooga saari doonto dhawr arin oo uu ku sheegay iney aheyd munaasbadi loo aasaasay kuwaad oo ka mid yihiin , Midnimo xarumaha warbaahineed , in ay helaan tababaro lana tayeeyo dhamaan wariyayaasha iyo iney qeyb ka noqdaan xarumaha sharciga media –ha ee hada loo wado barlamaanka.
Xasan Gesey ayaa sheegay in hadii xarumaha isku duubnaadan ay sahlanaan karto in xuquuqdooda ay si fudud ku helaan loona sameeyo shuruuc guud oo dhaxdooda ah .
Gagabadi ayaa la isla gartay in la joogteeyo kulmada nuucaan ah oo muhiim u ah iska warqabka iyo isla socodsiinta xaaladaha soo kordha ee warbaahinta dalka .